Yongeza umfanekiso oThunyelweyo kwiThupha lakho kwiWindowsPress RSS feed | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 5, 2014 NgoMgqibelo, Julayi 5, 2014 Douglas Karr
Besisoloko sikhuthaza abaxhasi bethu kunye nomxholo kutshanje nge Taboola, iqonga lokwazisa apho umxholo wethu ufundwa kwaye amanqaku ahambelana nolunye upapasho olufanelekileyo kuyo yonke iwebhu. Sonwabile ngolawulo olungenasiphelo kunikezelo kunye neendleko ngokukhokelwa yinkqubo- kunye nabasebenzi babo bebelungile.
Safudukela e Taboola emva kokusebenzisa enye inkonzo engaluhoyanga uhlahlo-lwabiwo mali kwaye bafuna ukuba sihlawule i $ 10,000 yexabiso lokusasaza abasinike lona. Mhlawumbi elona cala lalilelinye lawona manqaku babefuna ukuba sihlawulele ukunyuselwa kuwo yayilinqaku malunga nabo! Umm… hayi.
Olunye uncedo lweTaboola yayikukuba sinokusebenzisa zombini uluhlu lwamanqaku anqabileyo esinqwenela ukuwakhuthaza kunye nokusebenzisa ukutya kwethu ukuqhubeka nokwazisa amanqaku ethu amatsha. Ipholile kakhulu. Oku kuthetha ukuba sinokukhuthaza amanqaku malunga nabaxhasi bethu, amanqaku ethu athandwayo, kunye nokufumana ukugcwala kumanqaku akutshanje.
Into enomdla kukuba, nokuba uyakwenza oko imifanekiso efakiwe KwiWordPress, loo nto ayiguquli ukondla kwe-RSS yebhlog yakho ye-WordPress ukubandakanya ezo zihombiso kwi-RSS feed yakho. Ndicinga ukuba sisikhewu ekusebenzeni ekufuneka kulungisiwe yiWordPress, kodwa okwangoku kukho isisombululo!
ILadislav Soukup iphuhlise iplagi ebizwa ngokuba I-SB RSS feed kunye evumela ukuba ungene kwi-thumbnail yakho yeposi usebenzisa ngokufanelekileyo i-RSS feed Imidiya: umxholo kunye nokumakishwa okuvalelweyo. Faka kwaye uqwalasele iplagi kwaye ungakhankanya umfanekiso kunye nezinye iiparameter ezongezelelweyo.
tags: idibeneyofeed encinciSoukup yaseLadislavumxholo wemidiyathumela i-thumbnail kwisondlorss feedrss feed ebonisa umfanekisorss feed encincirss isikhombisisb rss feed kunye
Uchitha iintsuku ezingama-83 ngonyaka nge-imeyile
Epreli 16, 2016 ngo-10: 11 AM
Ngokwenene yayibuhlungu kakhulu ukubona i-RSS-to-imeyile imikhankaso ngaphandle kwemifanekiso kuba i-RSS feed yayingenayo i-tag eyimfuneko yokutsala imifanekiso. Nangona kunjalo, utshintshe ifayile ye-functions.php kwaye ngoku i-MailChimp inokutsala amacandelo afunekayo kwaye ngoku ii-imeyile zibukeka zihle.
Nangona kunjalo, imifanekiso ekwi-RSS feed ibonakala mikhulu ngokwenene kwaye unqwenela ukuyibuyisela kubungakanani obufanelekileyo. Ifuna ukukhangela ngakumbi kwaye ufumane isisombululo sale nto.